mercredi, 09 octobre 2019 22:13
Fianarantsoa: Hanao diabe am-pahanginana
Hisy diabe am-pahanginana hotanterahina eto an-drenivohitry ny Faritra Matsiatra Ambony ny zoma 11 oktobra 2019. Natao ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ireo namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nisesy teto Fianarantsoa, ho fifanohanana amin'ny fianakaviana namoy havana, ary ho fanairana ny fandraisana andraikitry ny rehetra sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ity hetsika ity.
Hiainga eo amin'ny Vigie Police Talatamaty ity diabe am-pahanginana ity, manomboka amin'ny dimy ora latsaka fahefany hariva, avy eo mihazo eny amin’i Aridera. Hisy fametrahana fehezam-boninkazo eo amin'ny toerana nitrangan'ny loza eo Talatamaty tamin’ny zoma 3 oktobra 2019.
Mitohy mihazo an'Ambalapaiso Ambony ny diabe, ary hisy koa fametrahana fehezam-boninkazo, toerana nahafaty ilay renim-pianakaviana mpangataka ny 7 oktobra 2019.
Nisaraka tamin’ny isa 3 noho 1 ny Barea CHAN sy ny ekipan'ny Elgeco Plus androany nandritra ny lalao fitsapana ny ekipam-pirenena Malagasy notanterahina tetsy amin’ny kianjan’ny Elgeco Plus eny By pass – Antananarivo ny tolakandro teo.
Nivoaka ho mpandresy ny Barea CHAN tamin’ity lalao fitsapana faharoa natrehiny ity, tafiditra amin’ny fanomanana ny lalao miverina hifanandrinana amin'i Namibia amin’ny 18 oktobra 2019.
Afa-po amin’ny ezaka sy ny fivoarana nasehon’ny mpilalao androany i Franklin, mpanazatra.
Efa nandresy 2 noho ny 0 ny Zanakala FC tamin’ny lalao fitsapana voalohany notanterahina ny Barea CHAN tamin’ny Alahady lasa teo.
mercredi, 09 octobre 2019 20:23
Analavory – Manakara: Mpizaika FLM tra-doza, zaza roa maty, 34 naratra
Fiara Sprinter iray nitondra olona miisa 36 avy ao Ambodirafia Ifanadiana, hamonjy zaikabe Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) aty Manakara no tra-doza, androany maraina, teo amin’ny fiolahana atao hoe Lapapa amin’ny lalam-pirenena faha-12, eo amin’ny PK 55+100.
Zaza roa mianadahy, 6 sy 4 taona no namoy ainy tamin'ity lozam-piarakodiana ity. Mpandeha 34 hafa naratra nalefa ao amin’ny hopitaliben’i Manakara, ka voa mafy ny 7 amin’ireo, mila mamonjy renivohitra ny fitsaboana noho ny halehiben’ny fahavoazana mahazo azy ireo.
Tonga nampahery ireo niharam-boina teny amin’ny hopitaly ny filohan’ny FLM, Dr Rakotonirina David sy ireo manampahefana eto Manakara.
mercredi, 09 octobre 2019 19:30
Morombe: Ny Fokonolona mikarakara mikajy, ny Srilankey manao be fiavy manjono
Malahelo ny mpanjono madinika aty Morombe manolona ny firodorodon’ny Srilankey, miaraka amin’ny fitaovana maro sy fahazoan-dalana hanjono sy hanangona haren-dranomasina.
Misy Fokonolona mitantana ny fari-dranomasina aty Morombe. Efa an-taonany maro ny Fokonolona no nanao ireo asa « conservation marine » aty, mba hitantanana maharitra ny hazandranomasina, ka gaga izy ireo amin’ny fidiran'ireo vahiny ireo, tonga hanjono aty Morombe, miaraka amin’ny fitaovana tsy mbola fampiasan'ireo mpanjono madinika ety an-toerana.
Hitsapa ny ekipan'ny Elgeco Plus ao an-jaridainan’ity farany eny By pass – Antananarivo ny Barea CHAN izao tolakandro izao. Lalao fitsapana faharoa izy ity, tafiditra amin’ny fanomanan'ny Barea CHAN ny lalao miverina amin'ny Namibia, hamafisina hatrany ny eo amin'ny lafin'ny fanafihana fa tsy hionona amin'ny fiarovan-tena fotsiny, hoy i Franklin, mpanazatra.
Nandresy 2 noho ny 0 ny Zanakala FC ny Barea CHAN tamin’ny lalao fitsapana voalohany notanterahina tamin’ny Alahady lasa teo
Nibata fandresena 1 noho 0 ny Barea CHAN nanoloana an’i Namibia, tamin’ny lalao mandroso notanterahina tetsy Mahamasina tamin’ny 22 septambra 2019. Hatao any Namibia amin’ny 19 oktobra 2019 kosa ny lalao famerenana. Raha tafavoaka eo ny Barea CHAN dia hahazo tapakila hiatrehana ny CHAN 2020, na ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika amin'ireo ekipam-pirenena rafetin'ireo mpilalao tsy mila ravinahitra, hatao any Côte d'Ivoire.
mercredi, 09 octobre 2019 14:04
Ambodisaina - Toamasina II: Miantso vonjy ny olona fa mihanaka indray ny radaka boka
Mameno tanàna aty Ambodisaina, Kaominina Toamasina suburbaine, distrikan'i Toamasina II ireo karazan-tsahona lehibe, antsoin’ny olona hoe : « radaka boka ». Sahona misy poizina izy io ka na ny biby mihinana azy aza maty. Miantso vonjy ny mponina manoloana izany, satria atahorana ny ankizy, ny fiompiana ihany koa mety ho ripaka.
mercredi, 09 octobre 2019 13:53
Ankatoko – Betsiaka: « Ravain’ny Sinoa ny tanànanay », hoy ny fitarainan’ny mponina
« Trano manodidina ny zato no trongisina eto aminay Antanagnivo, Fokontany Ankatoko, Kaominina Betsiaka », hoy ny mponina, fa hoe : « ilain’ny Sinoa hakana vato ». « Tsy misy tombontsoanay » Fokonolona na dia kely aza anatin’izao zavatra izao. « Tsy misy fanajana zon’olombelona ». « Aiza ny fanjakana », sa « didin’ny besandry » no ampanjakaina eto, hoy i Frédéric nitondra teny azy ireo tamin’ny antso an-telefaonina.
« Tsy malaina ny hiala izahay fa aiza ny tombontsoanay hahafahanay manorim-ponenana an-toeran-kafa fa tsy ravaravaina fotsiny amin’izao ny tranonay izay nandaniana vola aman-tapitrisa maro », hoy hatrany izy.
Miantso ny haino aman-jery sy mpanao gazety izahay, hoy hatrany i Frédéric, hidina ifotony hijery ny zava-misy aty Ankatoko, Kaominina Betsiaka, Distrika Ambilobe.
mercredi, 09 octobre 2019 13:49
Ratiharison Jean Navandahy: Nahazo LP, nivoaka ny fonjan’i Tsiafahy
Nahazo fahafahana vonjimaika (LP), ary dia nivoaka ny fonjaben’i Tsiafahy, nitazomana azy nanomboka tamin’ny 31 mey 2019, Ratiharison Jean Navandahy, filoha nasionalin'ny fikambanana Za Gasy, sady kandida tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin’ny 27 mey 2019.
Singa faran'izay madinika ny rano ary rehefa mitambatambatra dia lasa ranobe.
Nefa dia matanjaka izy. Mamelona izy, 80 % n'ny vatan'olombelona dia rano avokoa.
Ananantsika maro izy na ety an-tanety na an-dranomasina, fa tsy ampy ny fifehezana ny rano, izay azo ambolena, ihompiana, ary sotroina na ampiasaina andavan'andro.